Mar dhow wadooyinka noolaha-bitumen ee ku saleysan micro-algae? - AFRIKHEPRI
Meelo badan oo ka mid ah bio-bitumen oo ku saleysan miro-yaryar?
Codka Furan - Documentary (2017)
DMarkii horeba loo istcimaalay soo saarista biofuel, balaastig ama waxyaalaha la isku qurxiyo, microalgae ayaa loo soo bandhigay inay tahay beddel weyn oo batrool. Muuqaalkan, microalgae waxaa loo isticmaalay markii ugu horeysay samaynta bitumen.
Biobitum waxaa loo abuuray qayb ka mid ah Mashruuca Algoroute, oo ay taageerayaan cilmi baadheyaal ka socda Jaamacadda Nantes iyo Machadka Faransiiska ee Sciences iyo Teknolojiyada Gaadiidka, Qorshaynta iyo Shabakadaha (Ifsttar). Si tan loo gaaro, waxay isku daraan algae iyo biyo cadaadis saaran, ilaa dareere madow iyo fiiso oo u dhow saliidda caadiga ah la helo. Waxyaabaha la midka ahna kuma eka muuqaalkooda, maadaama biobitumenku uu la mid yahay astaamaha batroolka: “Dareere ka sarreysaa 100 ° C, waxay u oggolaaneysaa inay la jaan qaado isku darka macdanta; viscoelastic-ka -20 ° C illaa 60 ° C, waxay xaqiijineysaa isku xirnaanta qaab dhismeedka weyn, waxay taageertaa culeyska waxayna dejisaa walaaca farsamada ”.
Imtixaannadu waa in hadda la qabtaa si ay u bartaan habdhaqanka biobitumkan mudada gaaban, iyo faa'iidada waxqabadka ee geedi socodka ka hor intaadan arkin, laga yaabee, inay daboolaan wadooyinkayaga. Microalgae muddo dheer ayaa caan ku ahaa codsiyadooda sida midabaynta waxyaabaha la isku qurxiyo ama kaabayaasha cuntada. Nuxurkooda si ay u soo saaraan, tusaale ahaan, biofuels, waa fikrad soo baxday sannadihii ugu dambeeyay. Maanta, micro-algae waa mid ka mid ah rajo-galinta beddelka batroolka. Iyada oo la horumarinaayo habraacyo hufan oo faa'iido leh, alaabooyin badan oo ka socda warshadaha dib-u-warshadaynta ayaa noqonaya kuwo la heli karo.
Iyada oo qayb ka ah barnaamijka Algoroute, oo ay maalgaliso gobolka Pays de la Loire, cilmi-baarayaal ka socda sheybaarrada Nantes iyo Orleans ayaa soo saaray bio-bitumen iyagoo dib uga soo kabanaya haraaga micro-algae, tusaale ahaan ka soo saarista borotiinnada biyo-milka ka keena algae warshadaha qurxinta. Waxay isticmaaleen geedi socod cabitaan biyo-cabitaan ah, biyo si fudud si adag loogu cadaadiyay (gobolka hoose): kani wuxuu qashinka micro-algae u beddelaa weji-biyoodka madow ee loo yaqaan 'hydrophobic phase viscous (bio-bitumen) isagoo leh muuqaalka u dhaw midka sunta batroolka (fiiri sawirka). Hawshan waxaa lagu fuliyaa isbadal xaadir ah oo hadda ah 55%.In kasta oo walxaha kiimikaad ee sunta-bioumen-ka ay gabi ahaanba ka duwan tahay tan bitumen-ka batroolka, waxay leeyihiin waxyaalo isku mid ah: midabka madow iyo astaamaha rheology-ga. Dareere ka sarreysaa 100 ° C, bitumen-ka ayaa loo oggol yahay inay xaddiddo isku-darka macdanta; viscoelastic-ka -20 ° C illaa 60 ° C, waxay xaqiijineysaa isku xirnaanta qaab dhismeedka granular, waxay taageertaa culeyska waxayna dejisaa walaaca farsamada. Falanqaynta iska caabinta muddo kadib ayaa la bilaabay, iyo sidoo kale daraasado lagu qiimeynayo faa'iidada howsha iyadoo loo eegayo soosaar ballaaran.Hal-abuurnimadaani waxay keenaysaa ikhtiyaar cusub oo wax ku ool ah warshadaha wadooyinka, oo gabi ahaanba ku tiirsan batroolka. Illaa iyo hadda, noolaha-bioumens-ka soo saaray ayaa ku daray saliidaha asal ahaan ka soo jeeda beeraha (iyadoo ay ku yar tahay u tartamida nafaqada aadanaha) ama warshadaha waraaqaha, oo lagu qaso resins si loo hagaajiyo dhismahooda viscoelastic. Adeegsiga micro-algae, beerista taas oo aan u baahnayn abaabulidda dhul-gariir, sidaa darteed wuxuu soo bandhigayaa xallin soo jiidasho leh.
Arag in badan: http://www.culturesciences.fr/2015/04/10/algoroute-du-bitume-microalgues#sthash.Hu5AoqKY.dpuf
Gulleed daaqad, barta korantada waxay bixisaa tamar bilaash ah
Buugga Taariikhda Afrika
Abuuritaanka ka qaybgal web-TV ah - U dir fiidiyowyadaada
Kumaa bixinaya deymankaaga oo yeelanaya - Bhikkhu Revata